घरघरमा ‘नम्बर प्लेट’ : बुटवल उपमहानगरमा ‘मेट्रिक्स एड्रेसिङ सिस्टम’
बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरको भौगोलिक सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्दै जीआईएसका आधारमा घर नम्बरिङ गरेको छ ।
विवरणलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत अद्यावधिक गर्दै पूरा भएका घरमा नम्बर टाँस्ने काम समेत शुरू भइसकेको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको ६१ औं स्थापना दिवसका अवसरमा प्रमुख शिवराज सुवेदीले ‘मेट्रिक्स एड्रेसिङ सिस्टम’बाट नम्बरिङ गरिएको घरको नम्बर प्लेट टाँसेर शुभारम्भ गरे । बुटवल वडा नम्बर ८ राजमार्ग चौरहास्थित प्रहरी सपिङ कम्प्लेक्समा ‘ए००२ २०५६’ नम्बरको निलो टिनको नम्बर प्लेट टाँस्दै नम्बरिङको शुभारम्भ गरे ।
त्यसअवसरमा प्रमुख सुवेदीले उपमहानगरको वस्तुगत विवरणसँगै प्रत्येक घरको डिजिटल प्रविधिबाट नम्बरिङले योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र थप अध्ययनका लागि उपयोगी हुने बताए ।
सेवाग्राहीलाई प्रवाह गरिने सेवा, उपमहानगरका सेवा केन्द्र्रहरू, सार्वजनिक क्षेत्र, सडक, विद्यालदेखि वन क्षेत्र र ती स्थानदेखि आफ्नो घर कहाँनिर पर्छ भनेर हेर्न मिल्ने गरी ‘मेट्रिक्स एड्रेसिङ सिस्टम’बाट नम्बरिङ गरिएको प्रमुख सुवेदीले बताए । उपमहानगरमा सुवेदी निर्वाचित भएपछि गरिएको पहिलो निर्णयमध्येको यो अर्को उपलब्धि हो ।
नीति तथा कार्यक्रममै यसलाई समावेश गरेर व्यवस्थित रुपमा कार्यसम्पादन गर्नेमा पनि बुटवल नै मुलुकमा पहिलो मानिएको छ । मोबाइल एपमार्फत उपमहानगरका सेवा प्रवाहको जानकारी लिने र ‘मेट्रिक्स एड्रेसिङ सिस्टम’बाट नम्बरिङ गर्ने भन्दै पहिलो निर्णय गरिएको थियो ।
भौगोलिक अध्ययनका विज्ञ सम्मिलित परामर्शदाता छनोट गर्दै १ देखि ११ वडाका सबै घरको ‘मेट्रिक्स एड्रेसिङ सिस्टम’बाट नम्बरिङ पूरा गरिएको हो । अहिले काम पूरा भएका वडाहरू उपमहानगरमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेका हुन् । अब दोस्रो चरणमा वडा नम्बर १२ देखि १९ मा ‘मेट्रिक्स एड्रेसिङ सिस्टम’बाट नम्बरिङ शुरू गरिने उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
वैज्ञानिक सिस्टमबाट घर नम्बरिङ भएको र कर पनि वडा कार्यालयबाटै तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउन अग्रसर भइरहेको बताए । बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ६, ७ र ८ नम्बर वडाका घरमा नम्बर प्लेट टाँसिएको छ ।
हालसम्मकै आधुनिक वैज्ञानिक सिस्टमबाट घर नम्बरिङ गरिएपछि अब कुन घर कुन रोडको कति नम्बरमा पर्छ भन्ने जानकारी जीपीआरएस सिस्टमबाट थाहा पाउन सकिने छ । डिजिटल नम्बरिङपछि बारुण यन्त्र, एम्बुलेन्स, सुरक्षा व्यवस्थापनका काममा सहजता हुने र पाहुनाले समेत गुगल म्यापबाट घर पत्ता लगाउन सक्ने गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको विकास गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ ।
बुटवलको विकासमा जनसहभागिता उदाहरणीय मानिन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएका पूर्वाधार विकासका कामलाई प्रभावकारी बनाउन बुटवलले नेपाली भाषामै लागत स्टिमेट बनाउन शुरू गरेको छ । यो काम प्रदेशमै पहिलो हो ।
प्राविधिक भाषाले अलमलमा पर्ने, प्रक्रिया नबुझ्दा झन्झट मान्ने जस्ता समस्या देखिएपछि नगर प्रमुखले नै उपभोक्ता समितिका कामलाई प्रभावकारीसँगै गुणस्तरीय बनाउन यस्तो उपाय शुरू गर्न प्राविधिकलाई निर्देशन दिए ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले अहिले इलेक्ट्रोनिक्स विल्डिङ परमिट सिस्टममा भवनको विवरणलाई अनलाइनमार्फत व्यवस्थित गरिरहेको छ । गत वर्ष वैशाख १ गतेदेखि यस्तो प्रणाली शुरू गर्ने बुटवल उपत्यका बाहिरको पहिलो नगर हो । यस प्रणाली अन्तर्गत हालसम्म २ हजार ७७६ नक्सा दर्ता भएको र झण्डै १ हजार ५०० जनाले सम्पन्न प्रमाणपत्र लिइसकेको वरिष्ठ इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बुटवल उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएलगत्तै लामो समयदेखि रोकिएका नगरबासीका घरनक्साका कामलाई फटाफट गरेन मात्रै, वडा र टोलसम्मै पुगेर सेवाग्राहीलाई प्रमाणपत्र उपलव्ध गरायो । भवन संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिँदै जनप्रतिनिधिले प्राविधिकलाई वडावडामै लगेर शुरू गरेको यो काम पनि मुलुकमै नमूना मानिएको छ ।
बुटवलले सेवाग्राहीका लागि घरनक्सा पास सम्बन्धी विशेष जानकारी पुस्तिका सहितको टाइम कार्डसमेत लागू गरेको छ । यहाँका १९ वटै वडामा घर बनाउने कुनै पनि सेवाग्राहीलाई आफूले पालना गर्नुपर्ने नियम र भवन संहिताको मापदण्डका सबै प्रक्रियाबारे पूर्ण जानकारी सहितको पुस्तिका उपलब्ध गराइएको छ ।
अख्तियारकाे फन्दामा परेका उपभाेक्ता समितिका अध्यक्ष ...
काभ्रे जिप्रकाको १० महिना, फैसला कार्यान्वयनबाट १२ करोड राजश्व संकलन
भागबण्डा मिलाउन ३ मन्त्रालय टुक्राइंदै, कुन कुन टुक्रिएला ?
उद्योगी चन्द्र ढकाललाई कोरोना संक्रमण
करणको पार्टीमा ड्रग्स प्रकरण : भिडियोबारे फरेन्सिक रिपोर्टले के भन्यो ?
एसिडपीडित ४ जनालाई रोजगारी
रातभर लाइन बस्नेहरूको कथा : पीसीआरको फन्दाले भुइँको बास